A dainosoo ejiji, ogige ntụrụndụ agafe - Ocean Art
Olee otú Iji Zụrụ
ịme anwansị Animal
Dainosoo Hand Puppets
Ije ije dainosoo Gbaa ịnyịnya
Dainosoo Battery Cart
Animal Gbaa ịnyịnya
faiba glaasi Model
faiba glaasi dinosaurs
faiba glaasi Animal
Faiba glaasi Eserese na-atọ ọkpụkpụ
ịme anwansị ọkpụkpụ
Product nhazi ọkwa
(Dịrị gaba n'ime ebe kwuru na dị ka Ocean Art), e guzobere na 2009, bụ nke dị na High-tech Industrial Park, Zigong City, Sichuan Province, na ọ bụ ihe integrated na nkà mmụta sayensị na nkà na ụzụ enterprise nke pụrụ iche na imewe & development, rụpụta, ahịa, na ngosi nke ịme anwansị ngwaahịa. Ocean Art n'ilekwasị anya na nnyocha na mmepe nke animatronic dinosaurs, ịme anwansị anụmanụ na ụmụ ahụhụ, dainosoo fossils na ọkpụkpụ, wuru n'oge ochie osisi, lie gwupụtatụrụla ubi, miniature Okirikiri ala na-eje ije dainosoo uwe na ndị ọzọ na ịme anwansị ngwaahịa.
N'ihi na jụrụ ase banyere anyị na ngwaahịa ma ọ bụ price list, dị nnọọ kpọtụrụ anyị! ase
Ileba ndepụta ngosi
Dainosoo Park na Russia, 2016 Winter
2017 Sanya Haitang Bay dainosoo Okwu National Park
Dainosoo Park na Russia, 2016 Summer
2017 dainosoo Dream Park na Xiamen
ọchịchịrị nwere ike ịbụ na ihe mere ka ha kwụsị ụmụ ịga na dainosoo isiokwu ogige, na nke a bụ ihe kasị mma na-egosi.
The mbụ iri isii na isii Chinese dainosoo kpakpando Haitang Bay dainosoo park bụ ọdịdị zuru oke nke dainosoo research na China. Ha nile na-egosipụta n'ụzọ nke 1: 1 mbụ nnukwu nlereanya. The iri isii na isii umu animatronic dainosoo nke maded site anyị na ogige e arụnyere. Ndị a dinosaurs na-mere ígwè ọkpụkpụ na silica jel n'elu. Ha nwere ike ịgakwuru ndị ahụ na-eme ka ụda, na ịme anwansị dị nnọọ elu.
2016 Summer.Everyone hụrụ n'anya na-ahụ dinosaurs na isiokwu park n'ihi na ọ ga-eme ka ndị ọzọ obi ụtọ. Karịsịa maka ụmụaka, ha na-crazy banyere animatronic dinosaurs. Ugbu a, ọtụtụ n'ime isiokwu ogige ntụrụndụ dị iche iche animatronics ụmụ anụmanụ na ụdị, Ichi dinosaurs na-enyere na-adọta ndị ọzọ visitors.And a Russian dainosoo ogige bụ ihe nlereanya kasị mma.
The kacha mma dainosoo park mepere Xiamen. Ọ bụ dị iche iche site na omenala dainosoo park na ndị ọzọ dị ka a dainosoo sayensị ngosi nka. Ọ bụla esenowo ọkọkpọhi kasị saa mbara ma na-akpali akpali visual ahụmahụ
More Best-ere Products
Okwu: No.93, yejiagou, lianggaoshan n'okporo ámá, da 'ihe district, zigong obodo
Ekwentị: +86 13281378137
Ekwentị: +86 813 5803272
© Copyright - 2010-2019 : All Rights Reserved. Guide , Hot Products , Sitemap , IGBOB Mobile
Mechanical Dinosaur, Chinese New Year Dragon Costume, Walking Ride On Dinosaur, Giant Animatronic Dragon, dainosoo Train , Animatronic Dragon For Sale,